Alshabaab oo sheegtay iney Khasaare Lixaad leh gaarsiiyeen hay’ada nabadsugida qaranka(Bayaan) |
Alshabaab oo sheegtay iney Khasaare Lixaad leh gaarsiiyeen hay’ada nabadsugida qaranka(Bayaan)
War kasoo baxay alshabaab oo lagu qoray bogga ay shabaabku ku leeyihiin Aaladda Twitter-ka in alshabaab ay 4-tii bilood ee ugu danbeeyey iney dileen saraakiil iyo askar fara badan oo ka tirsanaa hay’ada sirdoonka dowlada Soomaaliya.
“Guutada ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee alshabaab ee Maxamed Ibnu Maslama waxa ay Muqdisho ka fuliyeen 4-tii bilood ee ugu danbeysay hawlgalo ay ku beegsanayeen khasaare ba’anne ay ku gaarsiiyeen cadowga Islaamka ee ay soo tababareen gaalada Reer galbeedka oo usoo carbiyey ilaalinta danahooda dhulalka Islaamka” ayaa lagu tiri bayaanka kasoo baxay alshabaab.
Alshabaab ayaa sheegtay iney mudadaa 4-ta bilood ah ay dileen 127 ruux oo ka tirsanaa hay’ada nabad sugida qaranka oo iskugu jiray Saraakiil,askar iyo waxa ay ku sheegeen Jawaasiis ku dhexjirtay bulshada Muslimka ah sida ay hadalka u dhigeen.
Warka kasoo baxay ururka alshabaab ayaa waxa ay ku sheegeen iney guul ka gaareen weerarada ay Muqdisho ka fuliyeen guutada ay ku magacaabeen Maxamed Ibnu Maslama,bayaanka shabaabka kasoo baxay ayaa intaa ku daray iney dhabarka ka jabiyeen hagardaamadii iyo dhibaatooyinka lala damacsanaa dadka Muslimiinta ah.
Hadalka kasoo baxay alshabaab oo ahaa mid aad u dheer ayaa waxaa ay ugu danbeyntii tilmaameen iney ku khasbeen masuuliyiintii iyo shaqaalihii kale ee hay’ada nabadsugida qaranka iney shaqada ka tagaan kadib markii ay xamili waayeen weerarada is daba joogga ah ee ay ku qaadayeen ilaa sida warka lagu tilmaamay uu shaqadii ka fariisto agaasimihii hay’ada nabad sugida dowlada Axmed Macalin Fiqi oo dhawaan ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkaas.